အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား ရေငုပ်သင်္ဘော ပါဝင်မှုအပေါ် ရှင်းလင်းချက်ပေးရန် တရုတ်စစ်တပ်က တောင်းဆို - Xinhua News Agency
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အမေရိကန် နျူကလီးယား ရေငုပ်သင်္ဘော ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အဖြစ်အပျက်ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းရန် တရုတ်စစ်တပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အမေရိကန်အား နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။အမေရိကန်ဘက်မှ ရေငုပ်သင်္ဘောမောင်းနှင်သွားလာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်၊ အချင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာ အတိအကျနှင့် ယင်းဖြစ်ရပ်သည် နျူကလီးယားယိုစိမ့်မှုနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Wu Qian က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် အမေရိကန် သင်္ဘောများမှ ပမာဏများများနှင့် မကြာခဏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်မှုအပြင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း စစ်ရေးအသွင်ပုံသွင်းမှုနှင့် ရေကြောင်းသွားလာရေးကြီးစိုးမှုများအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ မှတ်ယူကြောင်း Wu မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“အချိန်မနှောင်းမီမှာ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်ဖို့ အမေရိကန်ဘက်ကို တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု Wu က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 25 (Xinhua) — A Chinese military spokesperson Thursday urged the United States to explain in detail the incident involvingaU.S. nuclear submarine in the South China Sea.
“We urge the U.S. side to immediately cease these moves before it is too late,” Wu said. Enditem